ITOOBIYA MEEL ROON IYO MEEL BAAS HALKAY KU DAMBAYN DOONTA?. Faallada Siyaasi Cali Guray.
Wednesday November 24, 2021 - 01:58:40 in Wararka by Super Admin
Xaaladda Itoobiya ma muuqato in xal nabad ah lagu soo dabaali karo iska daa heshiis in la gaadho eh xataa xabadjoojin ayaaban suurtogal ahayn wakhtigan iyo xataa mustaqbalka dhaw. Marka aynu og nahay dhexdhexaadintii ergayga AU xabadjoojin shuruud la’aan ah. Shuruudaha labada dhinaca ee Abye Ahmed oo saaka ku waabariistay foromaha hore ee dagaalka iyo Madaxda TPLF ay ah kaaf iyo kala dheeri. TPLF sadex shardi oo ay ku xidhay aqbalaadda xabadjoojinta mid ahaan mooyee labada kale maba adka. Tigraygu waxay shardiga koobaad u ah in kaalmada bani aadminmo ay si caadi ah u gaadho dadka macaluushu hayso ee Gobolka Tigray. Waa ta labaad eh in loo soo wada celiyo gobolka dhamaan adeegyadii dawladda ee laga gooyay oo dhan, kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin Korontadii iyo warisgaadhsiintii iyo weliba gancasigii iyo isu socdka gaadiidka iyo badeecadaha. Qodobka ugu adag ayaa noqonayaa ee dhamaan ciidamada Itoobiyaanka, Amxaarada, iyo Calatariya ay wada baxaan galbeedka Gobolka Tigray sida Xumayra oo xadka Sudan oo Axmaaradu sheegato in ay degaankooda ka tirsan tahay balse Tigraygu ay degaankooda raaciyeen markii xukunka Itoobiya ay la wateegeen horaantii sagaashanadii qarnigii hore. Dhinaca Kale Abye Ahmed wuxu ku adkaysanayaa in aanay jirayn wax xabadjoojin ah inta ciidamada TPLF ay haystaan magaalooyinka iyo dhulka degaamada Amxaarada iyo Canfarta ee dagaalka ay ku qqbsadeen oo dhan dibna ciidamada TPLF ugu noqonayaam Gobolkooda Tegray.